Kambani yekuIndia Yopinda Munyaya yeMangoda ekwaMarange
Sangano revamabhizinesi munyika rinodaidzwa nerekuti Zimbabwe Diamond Consortium, ZDC, rinoti hurumende ichawana pundutso kubva muchibvumirano chakanyoreranwa pasi nekambani yeku India ye Surat Rough Diamond Sourcing neZDC.
Chibvumirano ichi ndechekuti Surat itenge mangoda ekwaChiadzwa anosvika $1,2 billion gore rega rega. Kambani iyi inonzi ichange ichipihwa mukana wekutenga mangoda ekwaMarange anoita zana remamiriyoni emadhora pamwedzi wega wega.
Hazvisati zvanyatsojekeswa kuti ZDC ichange ichiiteyi panyaya iyi. Asi mutevedzeri wegurukota rezvicherwa, VaGift Chimanikire, vati mangoda achange achitengeswa pamusika wemangoda zviri pachena, pasina kambani inopihwa mukana wekutenga mangoda aya pamberi pemamwe makambani, kanawo vanhuwo zvavo vane marezenisi ekutengesa mangoda.
Chibvumirana chinonzi chakanyoreranwa pasi kwasara mazuva mashoma kuti sangano re Kimberly Process rigare pasi kuti riongorore nyaya yekwa Marange uye kuti Zimbabwe iri kuita zvese zvinodiwa here pakucherwa nekutengeswa kwemangoda.
Va Supa Mandiwanzira ndivo vanomirira ZDC uye vari ivo vakasaina chibvumirano cheZDC neSurat. VaMandiwanzira vanoti vanhu vanosvika chiuru vachaenda kunodzidziswa neSurat basa rekuchenesa mangoda kuIndia, kuitira kuti vanhu ava vagoita basa iri munyika.
Asi nyanzvi munyaya dzezve hupfumi, uye vachishanda ne Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Va Prosper Chitambara, vanoti havaoni hurumende ichiwana mari inoshamisira kubva pamangoda emunyika.